तीन दर्जन बढी माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको लोभलाग्दो नाफा, कुनले कति कमाए ? (सूचीसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > तीन दर्जन बढी माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको लोभलाग्दो नाफा, कुनले कति कमाए ? (सूचीसहित)
तीन दर्जन बढी माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको लोभलाग्दो नाफा, कुनले कति कमाए ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको बीचमा पनि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको नाफा लोभलाग्दो रुपमा बढेको छ ।
अहिलेसम्म ३९ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था प्रकाशित गरेका छन् । चैत मसान्तसम्ममा ३९ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ५ अर्ब ४६ करोड ९८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।
जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११४.१० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले २ अर्ब ५५ करोड ४७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको कम्पनीले नै प्रकाशित गरेको वित्तीय अवस्थामा उल्लेख छ ।
प्रकाशति वित्तीय अवस्था अनुसार ३९ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै छिमेक लघुवित्तले वित्तीय संस्थाले नाफा आर्जन गरेको छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ९५ करोड ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा ५९.८९ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले गत वर्ष ५९ करोड ७९ लाख ९० हजार नाफा कमाएको थियो । प्रतिशतको आधारमा हेर्नेहो भने सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीमा घरेलु लघुवित्त रहेको छ ।
नाफा रकमको आधारमा सबैभन्दा कम आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको छ । कम्पनीले चालु आवको तेस्रो तैमाससम्म १५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
हेर्नुहोस्, कुनको कति ?
२०७८ वैशाख २० गते १८:५९ मा प्रकाशित
भोलिदेखि सबै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्ने निर्णय !
भारु नोटको सटहीका सम्बन्धमा के हुँदैछ ?
२० करोड लागतमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भवन बनाउँदै सरकार
बैंकको एटीएममा समेत नाकाबन्दीको असर
त्रिशुली नदी ¥याफ्टिङका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य !
बजारमा आयो ‘सेयरबाट करोडपति’को तेस्रो संस्करण